Maxaa ka taqaan meesha loo dalxiis tago Kolmården ee ugu weyn wadanka Sweden? | Somaliska
Kolmården waxeey ku taal bartamaha wadanka Sweden qaasatan Gobolka Östergötland inta u dhaxeysa Norrköping iyo Nyköping. Waxeey 22KM u jirtaa magaalada Norrköping waana meel aad iyo aad u qurux badan.
Maahan meel ku kooban wadanka Sweden oo kaliyah ee waxaa looga yimaadaa wadamada la isku yiraahdo Skandinavien. Waxaa laga helaa xawayaano kala duwan oo gaaraayo 740 xawayaan. kuwaas oo aan ka soo qaadan karno sida Gariga, Baciidka ,Cowsha, Goreyada iyo qaar kale oo badan oo aana halkaan ku soo koobi karin.
Waxaan booqasho gaaban ku tagnay 21 bishaan May aniga iyo qaar kale oo asxaabtayda ka mid ah, markii aan tagnay ayaa waxaa na soo jiitay bilicda meesha iyo sida loo habeeyay. Waxaan ku kulanay dad ka yimid wadamo kala duwan kuwaas oo noo sheegay in qaar aay ka yimaadeen wadanka Norway iyo qaar ka yimid wadanka Finland. dhamaan waxaan ku wada damaashaadnay muuqaalka qurxoon ee Kolmården.
Waa markii iigu horeysay ee aan tago Kolmården. waxaan ku soo arkay wax yaalo kala duwan oo aana is laheen waxaa laga helaa wadanka Sweden. waxaana ka mid ha markii aan arkay raxan Libaaxyo ah oo meel jiif jiifa, ayaay waxeey igu noqotay wax aan maleysan karin. balse markii aad weydiiso dadka ka shaqeeya meesha ayaay waxeey kuu sheegayaan in inta badan xawayaankaan laga keenay qaarada afrika.
Waxaad moodaa dad Uggaar waayay iyo dad kale in aay is heleen, taas oo aan ula jeedo markii aad joogto Somaliya waxaa arkee ugaarta wadankena oo duurka iska yaaceysa hadana waa la dishaa maalin walba hadana waa iska dhooban tahay marka nin walboow dadankaaga hormari iyo kan aad ku nooshahay.
by Siyaad Cabdi, Linköping
om vi fick fred, sedan tänker vi att göra bra satt till djuren, men jag tror att inte just nu.
May 26, 2012 at 14:21
ascl salaan dhamaan aakhyaarta jimcaale walaal bbal lasoco dooda arimaha mideenta ee arbacada 30/5/22012 wixii warna nooga soo gudbi
May 26, 2012 at 14:22
Hej! Jag tror dessa djuren Sveriga hämtade i Somalia, Somalia finns ingenting regering att kontrollera hela land.
Abdi website ka sheek Barlamanka uu leyahay walal mesha laka galayo sheek iyo meshuu ku qoran yahay warka waxa laka doodayo mahadsanid
masuulka sweden says:
nasteexo sis halkaan ka fiiri inta ku qortid google dhexdiisa stor osäkerhet om det ökande antalet somaliska anhöriga
May 27, 2012 at 01:10
Ugaarteenana ameey sideena camal usoo qaxeen Yurub ileyn ayakaba waa nafleeye oo meel ay ku badbaadan waa u baahan yihiine .
Aniga waxaan rabaa hal sagaaro o an samarka dubto qofkii igu caawin kara markaan ugaar baqlo afka ayaa igariiraya sida matorka marka qofki haayo bostada ayan usooqorayaa
Walaayaal waxaan idin weydiiyey dadka qaangaarka ah ma la qaadayaa?
asc/ waan idin salamay walahala qaaliga ilaah caafimad ha idinsiiyo gacmihiinana habarakeyo aad iyo aad ayan idinkugu mahad celineyna aniga iyo caailadeyda aad ayana uga helnay cunooyinka aan idinka bartay oo ilaah ajar ha idinka siiyo su aal walalayaal ma ii sheegi kartan hadad awoodan wax lagu dhaho english muluqiyo oo af carabiya iyo goobaha laga heli karo waan ku daalay saan u baadi goobayay mahadsanid